नयाँ साल २०७७ समग्रमा कस्तो बित्ला ?, सालभरिको राशिफल कस्तो छ ?,वर्ष भरीको विश्लेषण… « Farakkon
नयाँ साल २०७७ समग्रमा कस्तो बित्ला ?, सालभरिको राशिफल कस्तो छ ?,वर्ष भरीको विश्लेषण…
भोली वैशाख १ गते । अर्थात नयाँ वर्ष । नयाँ साल २०७७ समग्रमा कस्तो बित्ला ? तपाईंको २०७७ सालभरिको राशिफल कस्तो छ ? चर्चित ज्योतिषी मुस्कान खनाल ले कुन राशि भएकाले कस्तो फल प्राप्त गर्लान ? यसरी विश्लेषण गरेका छन् ।
वर्ष प्रवेशको समयमा तपाईको राशि स्वामी मंगल उच्चगृह मकर राशिमा दशौं घर कर्म क्षेत्रमा रहेको कर्मेश शनिश्चर समेत साथमा रहेकाले यसलाई तपाईंको पेसा व्यवसाय र व्यक्तित्व विकासका निमित्त शुभ नै मान्न सकिन्छ । तर यसले आमाबुबाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ, त्यसैले यसप्रति सचेत हुनुपर्छ । तृतीय भावको राहुले तपाईलाई धेरै साहसी, ऊर्जावान र उद्यमी बनाउँदछ, जसका कारण तपाईले सबैभन्दा ठूलो निर्णय लिन सक्नुहुन्छ वा कुनै ठूलो काम सजिलै बन्नसक्छ । अत्यधिक उर्जाका कारण, तपाईंले जिद्दीपन र उत्साही प्रवृत्तिबाट टाढा रहनु पर्छ र परिवारका जेष्ठ सदस्य वा दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा देखिने तिक्तता र मनमुटाव बढ्न दिनु हुँदैन । बृहस्पतिले प्रारम्भमा कर्मक्षेत्रमा, त्यसपछि भाग्यभावमा र अन्त्यमा पुनः कर्मक्षेत्र र लाभ भावमा उपस्थिति जनाएको छ, त्यसैले ज्ञानार्जनका मार्गमा केही उपलब्धी हासिल हुनेछन् साथै भाइबहिनी वा सन्तानको व्यक्तित्व विकास र उन्नतिरप्रगतिसमेत हुनेछ । युवाउमेरका व्यक्तिहरूको वैवाहिक जीवन प्रारम्भ हुने, नयाँ जोडीले सन्तान प्राप्त गर्ने, वैदेशिक प्रयोजनका हरेक काम सफल हुने वर्षका रूपमा नयाँ वर्ष २०७७ को आगमन भएको छ । व्यापारीहरूका लागि उतारचढाव र अस्थिरता देखिए पनि वर्षान्तसम्म लाभदायक परिणाम प्राप्त हुने संकेत छ ।
समग्रतामा यस वर्ष बृहस्पति अनुकूल रहनाले थालेका काम पूरा हुनेछन् । अध्ययनरअध्यापन कार्य सफल रहनुका साथै बौद्धिक क्षेत्रका सबै काम बन्नेछन् । राहु, केतु र शनि प्रतिकूल रहनाले पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा विवाद आउने, मानसिक सन्ताप बढ्ने र अनावश्यक झमेलामा फँस्नु पर्नेछ । व्यापार व्ययसायबाट लाभ हुनेछ । पारिवारिक स्वास्थ्यमा खर्च बढे पनि वर्षको उत्तरार्द्धमा आकस्मिक लाभ हुनुका साथै पछि लाभ हुने कामको थालनी हुनेछ । वैशाख, श्रावण, मंसिर र चैत महिना अशुभ फलदायी रहने छन् भने असार, असोज, माघ र फाल्गुन महिना शुभ फलदायक रहने छन् ।
यो वर्ष सुखबृद्धि हुने वर्ष हो, तर आयका दृष्टिकोणले सामान्य समय देखिएको छ । शनिश्चरमा बक्रता आउने हुँदा श्रावण २१ गतेदेखि मंसिर ०१ गतेसम्म पुनः अढैया शनिको प्रकोप दोहोरिने समय छ । ऋणभार बढ्नाले मानसिक कष्ट बढ्ने छ । केही अप्रिय घटनाहरूसमेत घटित हुनसक्छन् । व्यवसायमा अत्यधिक संघर्ष र परिश्रम गरेपछि मात्र आम्दानी सहज हुनेछ । वाणिमा नियन्त्रण राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ, नत्र बन्नै लागेको काम पनि आफ्नै बोलीको प्रभावले बिग्रने डर हुन्छ । दाजुभाइ र दिदीबहिनीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सफलता पाउने छन् । भूमि, भवन, वाहन आदिको क्रयरविक्रयका निमित्त शुभ समय छैन । विद्यार्थीहरूले पठनपाठनको क्षेत्रमा ध्यानकेन्द्रित गर्न सक्दैनन् । सन्तान पक्षबाट सहयोग नै मिल्नेछ । दाम्पत्य जीवनमा उतारचढाव आइरहने छ । कर्मचारी र कामदारले कडा मिहिनेत र संघर्ष गर्नुपर्ने समय छ । बन्धुवान्धव, मित्र र सहयोगीले काममा सरसहयोग नै गर्ने परिस्थिति देखिन्छ ।
वर्षारम्भमा राशिस्वामी शुक्रले तपाईंको आफ्नै राशिको भ्रमण गरेको अवस्था भएकाले यो वर्ष तपाईंले सुखसुविधा विस्तार गर्न, भोगविलासका विगतदेखिका इच्छाहरू पूर्ण गर्न तथा घरघडेरी, वाहन र लक्जरीमा बृद्धि गर्न खर्च बढाउने समय हो । जगल्लग्न कुण्डली हेर्दा तपाईंको राशिबाट भाग्यभावमा बृहस्पति, शनिश्चर र सप्तमेश मंगलको समेत उपस्थिति भएकाले यसको प्रभावले कार्यक्षेत्रमा कामको चाप बढ्ने, अनावश्यक अवरोध र दबाबमा बृद्धि भएर पेसा वा कार्यालय परिवर्तन गर्ने मनस्थितिको सिर्जना हुनेछ । दाजु वा पिताजीसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आउने वा वहाँहरूको स्वास्थ्यगत समस्याले मानसिक तनावमा बृद्धि हुने परिस्थिति छ । त्यसैले कार्यक्षेत्रमा सिनियर अधिकारीहरूसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत स्वास्थ्यस्थितिमा समेत सचेतता अपनाउनु राम्रो हुनेछ, खासगरी द्वितीय भावमा बसेको राहुको प्रभावले दाहिने आँखामा कुनै समस्या देखा पर्ने सम्भावना हुन्छ । उच्च राहुले धनभावमा बसेर आकस्मिक र अयाचित धनलाभको संकेत गर्दैछ । तर यसैका कारण पारिवारिक अशान्ति र कलहको परिवेशसमेत निर्माण हुनेछ ।
बोलीमा विकार आउने र कठोर शब्दको प्रयोग हुने खतरा भएकाले विवाद वा भेटघाटका क्रममा गम्भीर हुनु र तौलेर बोल्नु राम्रो हुन्छ । बृहस्पतिको गोचर तपाईंका लागि खासै शुभकारक हुँदैन । यस वर्षको अधिकांश समय भाग्यभावमा बसे पनि श्रावणदेखि कार्तिकसम्म यसले अष्टम भावको यात्रा गर्ने भएकाले तपाईंले यो वर्ष अत्यधिक परिश्रम गर्ने वर्ष हो । तर परिश्रमको फल चाहिं मीठो नै हुनेछ भन्ने बुझेर दत्तचित्त भएर खट्ने वेला हो । देवगुरुको प्रभावले तपाईंको निर्णय क्षमतामा निखार आउने छ । यसले तपाईंको मनोवृत्ति, धन र साहसमा पनि शुभफल नै प्रदान गर्नेछ । धर्मकर्म, पारम्परिक कृत्यहरू र पारिवारिक दायित्व निर्वाह गर्न तपाईं सफल बन्नुहुनेछ । छात्रछात्राले शैक्षिक क्षेत्रमा राम्रो स्कोरका साथमा प्रगति गर्नेछन् भने कुनै परीक्षा, प्रतियोगितामा अब्बल भएर उत्तीर्ण हुने सम्भावना पनि देखिन्छ । वर्षकुण्डलीमा चतुर्थेश सूर्यको बाह्रौं भावमा उपस्थिति भएकाले यसको मद्दतले तपाईंलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न र वैदेशिक प्रयोजनका स्कोलरशीप वा परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सघाउ पुग्नेछ ।
समग्रमा बृष राशिका जातकहरूका लागि व्यापार व्यवसाय र वैदेशिक क्षेत्रबाट राम्रै आम्दानी हुनेछ । दाम्पत्यजीवनका समस्याहरू समाधान हुनेछन् । नोकरीमा प्रगति हुने वर्ष छ । धार्मिक काम हुनेछन् र तीर्थयात्रा तथा पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण हुनेछ । जग्गाजमिन र वाहनसम्बन्धी कारोबार सन्तोषजनक हुनेछैन । पारिवारिक समस्याले सताउने र अनावश्यक खर्चसमेत बढ्ने छ । यस वर्ष नयाँ कामको थालनी हुने सम्भावना छ । आर्थिक दृष्टिले वैशाख, जेठ, भदौ र पुस महिना अशुभ रहने छन् त्यस्तै यस वर्षको श्रावण, कार्तिक, फाल्गुन र चैत्र महिना शुभ फलदायक रहने संकेत छ ।
यो वर्ष अष्टम भावको शनिश्चरको अढैया दशाको वर्ष हो । विरोधी सक्रिय हुनेछन् । न्यायिक क्रियाकलापमा अनावश्यक दौडधूप र बाधा हुने परिस्थिति छ । खर्चको मात्रा धान्नै नसकिने गरी अचानक बृद्धि हुनेछ । राजभयबाट मानसिक सन्ताप बढ्न सक्छ । आमा वा मातृपक्षका कुनै बृद्धबृद्धाको स्वास्थ्यस्थिति कमजोर हुने संकेत छ । महिला कर्मचारीले हाकिम वा सिनियरसित झगडा गर्ने र बाझ्ने परिस्थितिको निर्माण हुनसक्छ । पति वा पत्नीको स्वास्थ्यमा बाधा हुनेछ । व्यवसायमा खर्च बढी र लाभ कम हुने समय हो । सन्ततिले उन्नतिरप्रगति गर्नेछन् । नोकरीमा बढुवा र प्रशंसा पाउने समय हो । मातापिताको सद्भाव र आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ । विद्यार्थीहरूले पठनपाठनमा रुचि देखाउने छैनन् ।
वर्षप्रवेशको समयमा राशिस्वामी बुधले कर्मक्षेत्रमा उपस्थिति जनाएको छ । साथै यस वर्षको राजा तपाईंको राशिस्वामी बुध नै हो । अतः प्रयास गर्नुभयो भने यो वर्ष तपाईंका लागि वरदान साबित हुनसक्ने समय हो । बुधको तपाईंको कार्यक्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ, व्यापार र वित्तीय पक्ष मजबूत हुनेछ । रोजगारीको प्रयासमा हुनुहुन्छ भने टुप्पी कसेर तैयारी गर्नुहोस्, यस वर्ष सरकारी सेवा वा चाहेको प्रतिष्ठानमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन तपाईं सफल बन्नु हुनेछ ।
कार्यरत व्यक्तिहरूले कार्यालयका हाकिम र उच्च अधिकारीसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नुका साथै यस वर्ष पुरस्कार, प्रशंसापत्र वा बढुवा पाउने सम्भावना हुनेछ । तपाईंको राशिमा पहिले देखि नै भ्रमण गरिरहेको राहुले तपाईंलाई तीक्ष्ण बुद्धि प्रदान गर्दछ, त्यसैले आफ्नो उच्च गृहमा उपस्थित राहुले तपाईंलाई कुनै महत्त्वाकांक्षी र विशेष काम गर्नसक्ने सामर्थ्य प्रदान गर्नेछ । तर यसलाई भ्रम सिर्जना गर्ने ग्रह पनि मान्ने गरिन्छ, अतः तपाईंले आत्मरतिमा भुलिनु हानिकारक बन्न सक्छ भन्ने बुझेर लक्ष्यप्रति सचेत हुनुर्पछ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । यस वर्षको सुरुको तीन महिना र अन्त्यको चार महिना तपाईंको अष्टम भावमा अष्टमेश शनिश्चरसँग युतिसम्बन्ध बनाएर बृहस्पतिले नीच भंग राजयोग बनाएको छ । त्यसैले तपाईंको वैदेशिक प्रयोजनको हरेक काम सफल बन्ने देखिन्छ । मनमा लामो समयदेखि सँगालेर राख्नु भएको इच्छाले अचानक साकार रूप लिन सक्नेछ । बृहस्पतिको बक्रगति भई पुनः सप्तम भावमा बसेर तपाईंको राशिमा पूर्णदृष्टिले देख्नेछ । यसको प्रभावले दाम्पत्य सुख बढ्ने, साझेदारीको कामबाट फाइदा हुने, अविवाहितहरूको विवाह हुने वा कुराकानी चल्ने समय रहने छ । यस वर्ष भर्खर विवाह भएका नयाँ जोडीले बेबी प्लान गर्दा समेत शुभ हुनेछ ।
सप्तम भावमा केतुसमेत बसेर गुरु चाण्डाल योग बनाउने भएकाले व्यापार र व्यवसायमा स्वतन्त्र काम गर्नेहरूले लाभ लिन सक्ने तर साझेदारीमा काम गर्नेले कलह र विवादको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस वर्षको प्रारम्भमा अष्टम भावमा शनि र मंगलको युतिसम्बन्ध समेत रहने छ । यसको प्रभावले लामो समयदेखि उधारो वा सापटीमा गएको धन फिर्ता आउन सक्ने संकेत छ, त्यस्तै कुनै प्रशासनिक उल्झन, मुद्दामामिलामा फँस्नु भएको छ भने जीत हुनेछ । तर शनि र मंगलको यस गठबन्धनका कारण नयाँ विवाद र झगडाबाट टाढा रहनु तथा सडक पार गर्दा वा सवारी साधन गुडाउँदा सावधान रहनु राम्रो हो, नत्र दुर्घटनाजन्य जोखिमको योगसमेत निर्माण भएको देखिन्छ । साथै तपाईंले कुनै पनि काम गर्दा नियम र कानूनको उल्लंघन नगर्नु राम्रो हुन्छ, किनभने तपाईंलाई फँसाउनेहरू षडयन्त्रको तानाबुना रच्न यो वर्ष हरदम तैयार रहने छन् । त्यस्तै दीर्घ रोगीहरू खासगरी रक्त विकार, हाडजोर्नीको समस्या हुनेले सतर्क रहनु राम्रो हुन्छ । वर्षप्रवेशको समयमा सूर्य र शुक्रको उपस्थिति हेर्दा यो वर्ष तपाईंको कार्यक्षेत्रमा विस्तार हुनेछ, साथै एक भन्दा बढी आम्दानीका मार्गहरू देखापर्ने समय छ ।
समग्रतामा यो वर्ष मध्यम फल पाउने वर्ष हो । अष्टम भावमा रहने बृहस्पति प्रतिकूल रहनाले अध्ययनरअध्यापनको क्षेत्र कमजोर छ । बन्दव्यापार पनि सन्तोषजनक रहने छैन । वैदेशिक क्षेत्रबाट भने लाभ हुनेछ । नयाँ कामको थालनी हुनेछ । वर्षारम्भमा राहु र केतु प्रतिकूल रहनाले आफ्नो र पारिवारिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा खर्च बढ्ने छ । अढैया शनिका कारण शरीरमा आलस्य, काममा ढिलासुस्ती, मनमा अशान्ति, झुट्टा आरोप आदि अनिष्ट फल लाग्ने भएकाले शनिदेवको पूजाआजा र शान्ति गराउनु राम्रो हुनेछ । परिवारमा मांगलिक कार्य सम्पन्न हुनेछ । आर्थिक दृष्टिले वैशाख, भदौ, मंसिर र चैत महिना शुभ रहने छन् भने जेठ, असार, असोज र माघ कमजोर महिना रहने देखिन्छ ।
भाग्यले साथ दिएको वर्षका रूपमा नयाँ वर्ष २०७७ को आगमन भएको छ । सट्टापट्टाको काम वा सेयर मार्केटबाट लाभ पाउन सक्नुहुन्छ । मातापिताको सहानुभूति र सद्भाव प्राप्त हुनेछ । वर्षको पूर्वार्द्धमा भूमि, भवन, वाहनादिको क्रयरविक्रयका निमित्त शुभ समय रहने छ । सन्तानपक्षबाट शुभता नै प्राप्त हुनेछ, उनीहरूसँग भावनात्मक ढंगले पनि तालमेल हुनेछ । लामो समयसम्म छोराछोरीसँगै बस्ने अनुकूलता मिल्नेछ । दाम्पत्य जीवनमा वैचारिक मतभेद हुनेछ । नोकरीमा सरुवा हुने वा पेसा परिवर्तन हुने सम्भावना छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी अल्पकष्ट अर्थात् सामान्य समस्या देखिन सक्छ । शेयर बजार, आयातरनिर्यातको काम, गहना र हीरारजवाहीरातको व्यापार आदिबाट लाभ पाइने समय छ । त्यस्तै पेटको समस्या छ भने रोगबाट आक्रान्त बन्न सक्नुहुन्छ । विद्यार्थीहरूले सफलता आर्जन गर्ने समय हो ।
संवत्सर प्रारम्भ भएको दिन अर्थात् २०७६ चैत्र १२ गतेका दिन मीन राशिमा राशिस्वामी चन्द्रमाको परिभ्रमण छ, यो तपाईंको भाग्य भाव हो, त्यस्तै उक्त दिन रेवती नक्षत्र छ, जुन चन्द्रमाको छोरा बुधको नक्षत्र हो, त्यस्तै वर्ष प्रवेशको समयमा अर्थात् वैशाख ०१ गते सोमवार नै छ, अनि राशिस्वामी चन्द्रमाले बृहस्पतिको घर छैटौं भावको यात्रा गर्दैछ । यी लक्षणहरूको मनन गर्दा तुलनात्मक रूपमा यो वर्ष कार्यक्षेत्रमा विस्तार हुने, जागिरेले मान पाउने, पदोन्नति हुने र पायकपर्दो लाभमूलक ठाउँमा जागिर सरुवा हुने, प्रशासनिक काम व्यवस्थित हुने, उच्च अधिकारीहरूसंग राम्रो सम्बन्ध बन्ने वर्षको आगमन भएको छ । तर तपाईं अल्छी र अकर्मण्य बन्नसक्ने खतरा पनि देखिन्छ, परिणामतः कतिपय समस्याहरू पनि खडा हुने खतरा देखिन्छ । बाह्रौं भावमा राहुको उपस्थिति छ, यसको प्रभावले घरायसी र बाध्यात्मक खर्चको मात्रामा नियन्त्रण हुन सक्दैन । त्यस्तै हरेक काम दोहोर्याउनु पर्ने परिस्थिति बन्नेछ । कतिपय वैठक वा कार्यक्रम ऐनमौकामा रद्द हुने गर्छ । असोजपछि राहुको राशिमा परिवर्तन हुनेछ, त्यसपछि यी समस्या दोहोरिंदैनन् । बृहस्पति ग्रहले छैटौं र सातौं भावको यात्रा गर्नेछन् । दुबै भावमा बक्र अवस्थामा रहेको समयमा खासगरी जेठदेखि असोजसम्म तपाईंले आपसी विवाद र प्रतिकूल स्वास्थ्यस्थितिबाट बच्ने प्रयास गर्नुपर्छ । पछाडि बसेर कुरा काट्ने गोप्य शत्रुहरूबाट भय हुने भएकाले हरदम चनाखो हुनु पनि उपयुक्त हुनेछ । वर्षको सुरुको दुई महिना र अन्तिमको चार महिना बृहस्पतिको सप्तम भावको यात्राको समय हो, यस अवधिमा बन्दव्यापार र प्रशासनिक क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउने नै समय हो, तर वैवाहिक जीवन सुरु गर्न, पुत्रप्राप्तिको प्रयास गर्न, गृह निर्माणादि कार्य थालनी गर्न उपयुक्त समय हुनेछ ।
समग्रमा कर्कट राशिका जातकका लागि राम्रो समय रहेको छ । शत्रुहरूको नाश हुनेछ । सन्तानसुख मिल्नेछ । वैदेशिक कामबाट राम्रो लाभ हुनेछ । नयाँ कामको थालनी हुनेछ । अध्ययन अधुरो नै रहने छ । साझेदारी काममा विवाद उत्पन्न हुनेछ । नोकरीमा मानसम्मान मिल्नेछ । दाम्पत्य जीवनमा विश्वासको संकट देखा पर्नेछ । धार्मिक क्षेत्रको यात्रा हुनेछ । सामाजिक काममा धेरै समय बित्नेछ । आर्थिक दृष्टिले वैशाख, जेठ, असोज र पुस महिना शुभ रहेका छन् भने असार, साउन, कार्तिक र फाल्गुन महिना अशुभ रहने छन् ।
यो वर्ष सिंह राशिका जातकका निमित्त शारीरिक पीडा र शत्रुभय लिएर आएको देखिन्छ । तर आयमूलक क्षेत्रमा उल्लेखनीय लाभको संकेत छ । अभिन्न मित्रहरूले सरसहयोग नै प्रदान गर्नेछन् । भौतिक सुखका निमित्त र विलासी वस्तुको खरिदमा धनव्यय हुनेछ । घरायसी समस्याको समाधान हुनेछ । भूमि, भवन र वाहनको क्रयरविक्रयका निमित्त यो वर्ष शुभ छ । छात्रछात्राले पनि यस वर्ष उच्च अंकका साथमा सफलता आर्जन गर्नेछन् । सन्तानपक्षसँग सामान्य मतभेद हुनसक्ने समय हो । न्यायिक र प्रशासनिक संकटको अन्त्य हुनेछ । जीवनसाथीको स्वास्थ्यमा बाधा हुनसक्छ, सानोतिनो चिरफार नै गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नसक्छ । विवाहयोग्य जातकहरूको वैवाहिक जीवन सुरु हुने सम्भावना पनि देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीलाई कामको दायित्व थपिने र मान पाइने समय छ ।
संवत्सर प्रारम्भ हुँदा अष्टम भावमा र वर्षारम्भको समयमा भाग्यभावमा रहने राशिस्वामी सूर्यको प्रभाव राम्रो छ । तर पनि यो वर्ष तपाईंले आगो, विष र औषधीहरूको प्रतिक्रियाबाट जोगिनु आवश्यक देखिन्छ । अन्य क्षेत्रमा सूर्यले तपाईंको वर्चस्व स्थापना गर्न मद्दत गर्नेछ । तपाईंलाई सम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ । पञ्चमेश र अष्टमेश मानिने बृहस्पति तथा भाग्येश मंगलले समेत तपाईंको छैटौं भावको यात्रा गर्दैछन्, जहाँ वर्षप्रवेशको समयमा षष्ठेश शनिश्चरसमेतको उपस्थिति छ । गोचरमा छैटौं भावमा दुष्ट र क्रूर ग्रह बस्नु राम्रो हो, उता बृहस्पति नीच भावमा भए पनि नीचभंग राजयोग बनाएर बसेको छ, अतः यो वर्ष तपाईंले कुनै पनि प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्द्धा वा परीक्षामा सफलता पाउने वर्ष हो ।
गृहस्थीहरूले सन्तानको उन्नति मार्गमा बृद्धि भएको देख्न पाउने छन् । त्यस्तै वर्षको मध्यभागमा भाग्येश बृहस्पतिले पञ्चम भावको यात्रा गर्ने भएकाले प्रेमसम्बन्धमा रहेकाहरूले वैवाहिक गठबन्धनमा बाँधिने र नयाँ दम्पतीले सन्तान उत्पादन गर्ने सम्भावना पनि देखिंदैछ । वर्षप्रवेशको समयमा क्रूर ग्रहहरू मंगल र शनिश्चर छैटौं भावमा रहनु, राहुले एकादश भावको यात्रा गर्नु अनि राशिस्वामी सूर्यको भाग्यभावमा उपस्थिति हुनु यी सबै पक्ष तपाईंका लागि अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हुन् । तपाईं रोजगारीका लागि तैयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने सरकारी पदहरूमा आवेदन दिनुहोस् सफल बन्नुहुनेछ । पेसा वा व्यवसायमा परिवर्तनको इच्छा छ, चाहेको जिम्मेबारी र स्थान प्राप्त गर्ने मनसाय छ भने तिनले साकार रूप लिने समय छ । तर छैटौं भाव रोग र शत्रुको घर हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन । शत्रु बलिया र सक्रिय अवस्थामा छन्, तपाईंका हरेक गतिविधिबाट टाढा छैनन्, त्यसैले गैरकानूनी काम र बढ्ता बठ्याइँ गर्न खोज्नुभयो भने फन्दामा पर्ने डर पनि छ, होस राख्नुहोला ।
समग्रमा सिंह राशिका जातकका लागि राम्रो समय छ । अधुरा भएका काम र अध्ययनरअध्यापन कार्यले पूर्णता पाउने छ । सन्तान सुख मिल्नेछ । सन्तानको उन्नति प्रगति र संस्कारगत कार्य सम्पन्न हुनेछ । वर्षको पूर्वार्द्धमा राहु र बृहस्पति अनुकूल रहनाले आम्दानी राम्रो हुनुका साथै आम्दानीका नयाँ नयाँ स्रोतहरू देखा पर्ने वर्ष छ । दाम्पत्य जीवनमा विश्वासको संकट देखा पर्नेछ । धार्मिक र पर्यटकीय महत्त्वको क्षेत्रको यात्रा हुनेछ । घरपरिवारमा मांगलिक कार्य सम्पन्न हुनेछ । नोकरीमा मानसम्मान मिल्नेछ । कुटुम्बसँग गरिएको लेनदेन वा सम्पत्ति सम्बद्ध कारोबारले विवाद निम्त्याउन सक्छ । व्यापार तथा वैदेशिक प्रयोजनका कामबाट राम्रो लाभ मिल्नेछ । यस वर्ष आर्थिक दृष्टिले जेठ, असार, कार्तिक र माघ महिना शुभ रहेका छन् भने साउन, भदौ, मंसिर र चैत्र महिना अशुभ रहने देखिन्छ ।
यो वर्ष उन्नतिकारक वर्ष हो । घरपरिवारका सबै सदस्यको समेत उन्नति हुनेछ । परिवारमा सुखद वातावरण सिर्जना हुनेछ । मित्रहरूबाट आवश्यक सरसहयोग पाइने छ । फंसेको धन र गुमेको प्रतिष्ठा उकास्ने समय हो । मनोरञ्जक क्रियाकलाप र सुखसुविधाका साधनहरूप्रति आकर्षण बढ्ने छ । भूमि, भवन र वाहन क्रयरविक्रय गर्ने वा साटफेर गर्ने प्रयास सफल हुनेछ । मातापितासँगको सम्बन्ध राम्रो हुनेछ, वहाँहरूको सद्भाव र आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ । विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा साख कायम राख्नेछन् । सन्तान पक्षबाट पनि सुखसन्तोष नै मिल्नेछ । विरोधी सक्रिय रहने समय हो । व्यवसायमा उन्नति र लाभ हुनेछ । नोकरीमा पदोन्नतिको योग छ । कुनै धार्मिक स्थलको यात्राको सम्भावना पनि देखिन्छ । न्यायिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । श्रावण २१ गतेदेखि मंसिर ०१ गतेसम्म शनिको अढैया प्रकोपको पुनरागमन हुने भएकाले उक्त अवधिमा सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
वर्षप्रवेशको समयमा राशिस्वामी बुधले सप्तम भावको यात्रा गर्ने र संवत्सरको पहिलो दिन बुधबार नै परेकाले राशिस्वामी बुध वर्षाधिपति भएको तथा भाग्येश शुक्रले भाग्य भावकै यात्रा गरिरहेको समय भएकाले यो वर्ष तपाईंका लागि आशाका नयाँ किरणहरू लिएर उपस्थित भएको छ । प्रसिद्धि र सम्मानमा बृद्धि हुनेछ । विद्वानहरूका साथमा घुलमिल हुने मौका आउने छ । बन्दव्यापारमा बढावा हुनेछ । विपरीत लिङ्गीहरूबाट सहायता मिल्नेछ । सुखद यात्रा हुने सङ्केत पनि छ । किनमेलका क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त हुनेछ । साझेदार र सहयोगीले पूर्णरूपेण सहयोग गर्नेछन् । कुनै प्रतिस्पर्धामा समेत सफलता हाासिल हुनेछ । युवा उमेरका व्यक्तिहरूको वैवाहिक जीवन प्रारम्भ हुनेछ । उता पञ्चम भावमा पञ्चमेश शनि, तृतीयेश मंगल र सप्तमेश बृहस्पतिको त्रिग्रह युति रहेको देखिन्छ, ग्रहहरूको यस संयोजनले शिक्षा र प्रतिस्पर्धाका क्षेत्रमा केही चुनौती बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ, अतः खासगरी छात्रछात्राले अध्ययनमा लापरबाही गर्नु राम्रो हुँदैन ।
त्यस्तै यसै ग्रहमीलनको प्रभावले गर्दा प्रेमजीवनमा निराशा र संकटको अवस्था आउने छ । गृहस्थीहरूलाई छोराछोरीको चिन्ताले सताउने छ । यो तपाईंले आफ्नो लक्ष्य र काममा ध्यान केन्द्रित गर्ने समय हो । त्यस्तै गर्भिणीहरूले अलि बढी सतर्कता अपनाउने वेला पनि हो । बेबी प्लानको योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईंले वर्षको अन्तिम तीन महिनालाई रोजेको जाति हुनेछ । दशम भावमा आफ्नो उच्च राशिमा बसेको राहुले तपाईंलाई कठिन चुनौती र विपरीत परिस्थितिबाट लड्न सक्ने सामर्थ्यको विकास गर्नेछ । यसले तपाईंको मिहिनेतको परिणामसमेत दिने भएकाले पेशारव्यवसाय र रोजगारीको क्षेत्रमा प्रतिष्ठा बृद्धि गर्न मद्दतसमेत गर्नेछ । राजनीतिक वा सामाजिक सम्बन्धमा सकारात्मक फल प्राप्त हुनेछ । तपाईं राजनीति गर्नुहुन्छ भने कुनै ठूलै पदमा निर्वाचित वा मनोनीत बन्न सक्नुहुन्छ । यो राजनीतिमा प्रवेश गर्ने ठूलो अवसर पनि हो ।
समग्रमा कन्या राशिका जातकले मध्यम फल पाउने वर्ष हो, नयाँ वर्ष २०७७ । भूमि, भवन र वाहनको व्यवस्था गर्ने वर्ष हो । व्यापारबाट सोचेअनुरूप लाभ मिल्नेछ । पुर्ख्यौली सम्पत्ति पारिवारिक समस्याको बिउ बन्नेछ । वैदेशिक क्षेत्रको काम भने अधुरै रहने छ । नोकरीमा अपजस खेप्नु परे पनि पदोन्नति हुनेछ । अध्ययनमा सफलता मिल्नेछ । वर्षारम्भमा आँखासम्बन्धी समस्याले सताउने छ । धार्मिक र सामाजिक गतिविधिमा समय बित्नेछ । आर्थिक दृष्टिले असार, साउन, मंसिर र फाल्गुन महीनाहरू लाभदायक रहने छन् भने तुलनात्मक रूपले वैशाख, भदौ, असोज र पुस महिना तपाईंका लागि कमजोर रहने देखिन्छ ।
यो वर्ष तुला राशिका जातकका लागि शनिश्चर ग्रहको अढैया दशा चलिरहेको समय हो । अथक परिश्रम र प्रयास गर्दासमेत समुचित फलप्राप्तिमा कठिनाइ हुने समय छ । गरेका हरेक काममा विभिन्न बाधा अड्चन आइ लाग्नेछन् । विश्वासी व्यक्तिले धोका दिन सक्छ । चोरी र धूर्त्याइँका माध्यमबाट पनि धनहानिको योग बनेको छ । नयाँ ठाउँमा धन लगानी गर्नु, सेयर वा जग्गाजमिन खरिद गर्नु पनि फाइदाजनक नहुन सक्छ । घरायसी खर्चलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिंदैन । आयको मार्गमा पनि कमी देखिने छ । मातापितासँगको सम्बन्धमा तिक्तता आउन सक्छ । पतिपत्नीका बीचमा ठास्सठुस्स र मतभेद बढ्ने समय छ । न्यायिक वा प्रशासनिक काममा पनि गतिरोध हुने देखिन्छ । प्रेमजीवनमा पनि कटुता देखिने छ । यो वर्ष तपाईंले व्यक्तिगत स्वास्थ्यस्थितिप्रति समेत सचेत हुने वर्ष हो ।
अतः तुला राशिका जातकहरूका लागि नयाँ वर्ष २०७७ सफलता र असफलताको मिश्रणका रूपमा उपस्थित भएको छ । वर्षारम्भमा राशिस्वामी शुक्रले आफ्नै घरको यात्रा गरे पनि तपाईंको राशिबाट अष्टम भावको यात्रा गरेको समय हो । उता चतुर्थ भावमा मंगल र शनिश्चर विद्यमान छन् । तर यसै भावमा वर्षको अधिकतम समय बृहस्पति ग्रह बसेर राजयोग सिर्जना गर्ने भएकाले केही हदमा आशावादी बन्ने समय पनि छ । तपाईंले खासगरी यो वर्ष पारिवारिक कलह र मानसिक उथलपुथलको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसैले धैर्य र संयम हुनु अत्यावश्यक देखिन्छ । कुनै सवारीसाधन खरिद गर्ने वा साटफेर गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ भने यो वर्ष स्थगित राख्नु राम्रो हुन्छ, साथै हरेक भ्रमणका क्रममा सरसामानको सुरक्षामा अधिक सतर्कता अपनाउनु राम्रो हुनेछ । त्यस्तै घरको राखनधरन र तालसाँचोमा सतर्कता अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ, किनभने यो वर्ष तपाईंको घर वरिपरि चोरको बिगबिगी हुने समय हो । त्यस्तै चतुर्थ भावमा वर्षभरि शनिको उपस्थिति हुने तथा अढैया शनिको दशा रहने भएकाले घरका वयोबृद्ध व्यक्तिहरूको खासगरी स्वास्थ्यस्थितिप्रति सचेतता अपनाउनु राम्रो हुनेछ, साथै मातापितासँग मनमुटाव हुने परिस्थितिसमेत बन्न सक्छ, संयम बन्नु राम्रो हुनेछ ।
तर चतुर्थ भावको शनिको राजनीति वा राजनीतिज्ञसँग गहिरो सम्बन्ध हुने भएकाले यो राज्यपक्षबाट सुविधा पाउने र उच्च पद हासिल गर्ने समय पनि हो, प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ । बाह्रौं भावको मालिक बुधले छैटौं भावको यात्रा गरेको समयमा वर्षारम्भ भएको छ, बुध यस वर्षको राजा हो, तथा यो भाग्यभावको मालिक समेत हो, त्यसैले यो वर्ष अनियन्त्रित ढंगले खर्च गर्ने वर्ष हो । कतिपय खर्चका शीर्षकहरू धर्मकर्म, संस्कार, परोपकार र पारम्परिक क्रियाकलापसँग सम्बद्ध हुनेछन् । तर बुधकै प्रभावले तपाईले विदेशी नागरिकता वा भिसा आदिका लागि आवेदन दिंदा सफलता दिलाउने समय छ । राहु र केतुले भाद्र महिनामा राशिपरिवर्तन गरी क्रमशः द्वितीय भाव र अष्टम भावको यात्रा प्रारम्भ गर्नेछन् । त्यसैले वर्षान्तमा अझ कठिनाइ र चुनौतीहरू बढ्न सक्छ, यस अवधिमा तपाईं कसैको षड्यन्त्रमा फँस्न सक्नुहुन्छ, साथै अड्डाअदालत धाउने परिस्थिति पनि बन्नेछ, सचेत र सतर्कता अपनाउनु राम्रो हुनेछ ।
समग्रमा तुला राशिका जातकका लागि यो वर्ष मध्यम फलदायी वर्ष हो । मुद्दामामिलामा विजय प्राप्त हुनेछ । लेनदेन कारोबार र धनसम्पत्तिको विवादले आफन्तका बीचमा वैरभाव सिर्जना गर्ने र फाटो ल्याउने परिस्थिति देखिन्छ । कार्यक्षेत्र र बन्दव्यापारबाट सामान्यतया लाभ नै हुनेछ । दाम्पत्यजीवनमा उतारचढाव आइरहने छ, देखा परेका समस्या हल गर्न आपसी समन्वयसमेत हुनेछ । गरेका हरेक क्रियाकलापमा पारिवारिक सहयोग मिल्नेछ । वैदेशिक क्षेत्रका काम बन्नाले राम्रो आम्दानीसमेत हुनेछ । नयाँ कामको थालनी हुनेछ । नोकरीमा पदोन्नति हुनेछ । पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा विवाद उत्पन्न हुनेछ । यो वर्ष आर्थिक दृष्टिले साउन, भदौ, पुस र चैत महिना शुभ रहेका छन् भने जेठ, असोज, कार्तिक र माघ महिना कमजोर रहने देखिन्छ ।
बृश्चिक राशिको राशिस्वामी मंगल ग्रहलाई मान्ने गरिन्छ । यस पटक वर्षारम्भको समयमा तपाईंको राशिबाट तृतीय भावमा मकर राशिमा राशिस्वामी मंगलले आफ्नो उच्च गृहमा, पराक्रमेश र सुखेश मानिने शनिश्चरले आफ्नै राशिमा र पञ्चमेश बृहस्पतिले नीच राशिमा बसेर राजयोग सिर्जना भएको समय हो । अनि यस वर्षको वर्षप्रवेश कुण्डलीको लग्न भावमा तपाईंको राशि परेको समय छ । त्यसैले यो वर्ष तपाईंका लागि वरदान नै साबित हुने समय हो । यस्तो ग्रहयोगले तपाईंलाई हिम्मतबाला, साहसी र शक्तिशाली बनाउन मद्दत गर्दछ । तर भ्रमका पछि कुद्नु भयो भने यसै परिस्थितिबाट तपाईं स्वच्छन्द, क्रूर र अपराधी पनि बन्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले सकारात्मक मनस्थिति र सदाचारको पालना गरी नयाँ वर्ष २०७७ लाई बिताउने प्रयास गर्दा भाग्य निर्माण गर्ने र दूर भविष्यका लागि जग निर्माण गर्ने समय आएको छ । यो वर्ष हरेक मौकामा तपाईले लिनु भएको निर्णय सफल हुन्छ, तर हरेक निर्णयमा गम्भीरता पूर्वक सोचविचार गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यस्तै दाजुभाइका बीचमा विवाद उत्पन्न हुनसक्छ ।
वर्ष तृतीय र द्वितीय भावमा बृहस्पतिको उपस्थिति हुनेछ, त्यसैले बृहस्पतिले पनि तपाईंका लागि शुभ फल नै प्रदान गर्नेछन् । यस वर्ष बृहस्पतिको प्रभावले आर्थिक पक्ष मजबुत भएर जानेछ, परिवारका ज्येष्ठ सदस्यहरूको सहानुभूति र आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ । सप्तमेश शुक्रले सातौं भावकै यात्रा गरेको समयमा वर्षारम्भ भएकाले यो वर्ष घुमघाम, भ्रमण, मनोरञ्जन र मौजमस्तीको वर्ष हो भन्दा फरक पर्दैन । विवाह हुन बाँकी व्यक्तिहरूको वैवाहिक प्रस्ताव आउन सक्छ । बृश्चिक राशिका विवाहयोग्य युवायुवतीमध्ये धेरै को वैवाहिक जीवन २०७७ सालको मंसिर महिनामा प्रारम्भ हुने सम्भावना देखिन्छ । यो वर्ष नयाँ ढंगको जीवनयात्रा प्रारम्भ गर्ने र समाजमा प्रतिष्ठा बढाउने वर्ष हो, तपाईंले लिनु भएका निर्णय र कार्यहरूको सराहना गरिने समय छ । नोकरी पाउने वा नोकरीमा प्रमोशन पाउने समय छ । गुमेको पद, प्रतिष्ठा र धन पुनः प्राप्त गर्ने समय पनि हो । असोजपछि राशिमा राहुको प्रवेश हुने भएकाले तपाईं भ्रमको शिकार बन्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले उत्तरार्द्धका तुलनामा यो वर्षको पूर्वार्द्ध अझ बलियो देखिन्छ ।
समग्रतामा तपाईंका लागि यो वर्ष फलदायी समय कै रूपमा आएको देखिन्छ । हरेक काममा परिवारको सहयोग मिल्नेछ । सन्तानसुख पाइने छ । स्वास्थ्यसम्बद्ध समस्या भने यदाकदा भइरहने परिस्थिति छ । शत्रुहरू परास्त हुनेछन् । मोटरगाडी, जग्गाजमिन र घरघडेरीको सुख मिल्नेछ । नोकरीमा पदोन्नति हुनेछ । परिवारमा मांगलिक कार्य सम्पन्न हुनेछ । यस वर्षको अधिकतम समय घुमघाम र पर्यटनमा तथा सामाजिक र धार्मिक क्रियाकलापमा बित्ने संकेत छ । वैदेशिक प्रयोजनका काम बन्ने समय छ । तर वर्षको पहिलो भाग शुभ छ भने उत्तरार्द्धमा बन्न लागेको काम पनि बिग्रने, साझेदारी काममा विवाद बढ्ने र मुद्दामामिलामा समेत फंस्नु पर्ने हुनसक्छ । तपाईंका लागि यस वर्षको वैशाख, भदौ, असोज र माघ महिना शुभ फलदायक रहने छन् भने असार, कार्तिक, मंसिर र फाल्गुन महिना कमजोर समय हुनेछ ।
धनु राशिका जातकहरूलाई शनिको साढेसातीको प्रभाव रहेको समय हो । त्यसैले नवीन कारोबार वा व्यवसाय थालनी गर्नुपूर्व गम्भीरतापूर्वक सोचविचार गर्नु राम्रो हुनेछ । सप्तम भावमा राहु र शनिश्चरको षडष्टक योग सिर्जना हुन गएकाले वर्षभरि पारिवारिक कलहको वातावरण बन्नेछ । कुटुम्ब वा छिमेकीसँग सम्पत्तिको लेनदेनको विवाद र झगडा हुने समय छ । विद्यार्थी, परीक्षार्थी र प्रतियोगीले लक्ष्यमा पुग्न र सफलता आर्जन गर्न कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । भूमि, भवन र वाहनको क्रयरविक्रयको योग छ । कर्मचारीले हर्षित हुने खबर सुन्नपाउने छन् । कार्यक्षेत्रमा सुखद वातावरण सिर्जना हुनेछ । न्यायिक र प्रशासनिक काम यथावत् सञ्चालन हुनेछन् । पछाडि उछित्तो काड्ने र षड्यन्त्रको तानाबुना रच्नेहरू सक्रिय रहेको अवस्था छ । वाहन चलाउँदा र बाटो काट्दा सजग रहनुपर्छ, सामान्य दुर्घटनाको योग छ । ऋणभार बढ्ने र सञ्चित धनमालको नाश हुने परिस्थिति पनि रहेको देखिन्छ । बन्दव्यापारमा संलग्न हुनेले मध्यमफल पाउने छन् भने प्राइभेट कम्पनीमा जागिर खानेहरूले असाध्यै दौडधूप गर्ने परिस्थिति देखिन्छ ।
राशिस्वामी बृहस्पतिले यस वर्ष आफ्नै राशिमा, द्वितीय भावमा र तृतीय भावमा समेत यात्रा गर्ने समय छ । जेठदेखि भाद्रसम्म राशिस्वामी बक्री हुने अवस्था बाहेक यस वर्षको सम्पूर्ण अवधि तपाईंका लागि शुभफलका साथमा उपस्थित भएको छ । हुन त शनिको साढेसातीको अन्तिम फेज चलिरहेको समय पनि हो । तर वर्षको अधिकतम समय राशिस्वामी बृहस्पति र शनिश्चरको मिलन भएर नीचभंग राजयोग सिर्जना हुने भएकाले यस प्रभावबाट पनि तपाईंले केही न केही राहत र शुभफल नै प्राप्त गर्नुहुनेछ । अतः नयाँ वर्ष २०७७ तपाईंका शुभ योगका साथमा आएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
यस वर्ष तपाईंले गुमेको साख र प्रतिष्ठा जोगाउनु हुनेछ । भ्रमवश अन्तै छरिएको धन फिर्ता आउने छ, साथै अचानक र आकस्मिक ढंगले विदेश यात्राको योगसमेत बन्ने सम्भावना छ । मुद्दामामिला, झैझगडा र कलह समाप्त हुनेछन्, अनि यो वर्ष आर्थिक पक्ष मजबुत बन्ने समय पनि हो । ज्ञानार्जन, धर्मकर्म र सांस्कृतिक पाटोमा सक्रिय हुनुहुन्छ भने तपाईंले आशावादी बन्ने समय छ । यस वर्ष आत्मविश्वासमा बृद्धि हुनाले लगातार सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ । सम्मान र प्रतिष्ठा मिल्नेछ । घरपरिवारमा माङ्गलिक कार्यको आयोजना हुनसक्छ । प्रणय र प्रेमसम्बन्धका निमित्त राम्रो समय छ । आफ्नो बुद्धिमत्ता र तीक्ष्ण दृष्टिकोणका कारण उचित समयमा सही निर्णय लिन सकिने छ । बन्दव्यापार वा पेसाबाट लाभ प्राप्त हुनेछ । सामाजिक क्षेत्रमा सुसम्बन्ध बढ्ने छ । धार्मिक क्रियाकलापमा सहभागी भइने छ । मित्रवर्ग र हितैषीले पूर्ण सहयोग गर्नेछन् । असोजमा तपाईंको शिरमा रहेको केतुले बाह्रौं भावमा र सप्तम भावको राहुले छैटौं भावमा प्रवेश गर्नेछन् । अतः यस वर्षको उत्तरार्द्धतिर अझ धेरै शुभफल प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।
समग्रतामा धनु राशिका जातकहरूका निमित्त यो वर्ष सामान्य र कार्यमा निरन्तरता प्रदान गर्ने वर्ष हो । आफ्नै बोलीका कारण आफन्त टाढिने र कामहरू बिग्रने डर चाहिं देखिन्छ । त्यस्तै पेटसम्बन्धी समस्याले वर्षारम्भमा सताउने छ । नोकरीमा अपजस खप्नु परे पनि मान बढ्ने समय छ । वर्षको उत्तरार्द्धबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरूबाट मुक्ति पाइने छ । साँढेसाती शनिको अन्तिम चरणको क्रम सुरु भइसकेको छ । यसको प्रभावले झुट्टा आरोप लाग्ने, बन्धनमा पर्ने, धनको नोक्सान हुने, आफन्तका बीचमा वैरभाव उत्पन्न हुनेजस्ता अशुभ फल प्राप्त हुने भएकाले शुभफल प्राप्तिका लागि शनिदेवको पूजा आराधना स्तोत्रपाठ र शान्ति आदि गर्नु राम्रो हुनेछ । आर्थिक दृष्टिले यस वर्षको जेठ, असोज, कार्तिक र फाल्गुन महिना शुभकारक महिना रहने छन् भने साउन, मंसिर, पुस र चैत्र महिना कमजोर महिना देखिन्छन् ।
यी विविध नकारात्मक फल प्राप्त भए पनि मकर राशिका जातकहरूले अत्तालिई हाल्ने परिस्थिति चाहिं छैन । किनभने यो वर्षको सम्पूर्ण अवधि तपाईंको राशिस्वामी शनिश्चरले तपाईंको आफ्नै राशिको भ्रमण गर्ने समय हो । वर्षारम्भको समयमा बृहस्पतिसमेत शिरमा बसेर राजयोग सिर्जना गर्दैछ । त्यसैले तपाईंका लागि समेत यो वर्ष वरदान साबित हुनेछ । हुन त वर्षप्रवेश कुण्डलीमा मंगलले पनि तपाईंकै राशिमा भ्रमण गरेको देखिन्छ, तर बृहस्पति र शनिको शुभ प्रभावको आधिक्यले मंगलको अशुभ प्रभावमाथि दबाब सिर्जना गरी तपाईंका लागि फाइदाकारक नै बनाउने निश्चित छ । शिरमा बसेको राशिस्वामी शनिश्चरको शुभ परिणामको प्रभावले यो वर्ष आत्मविश्वासमा अभिबृद्धि हुनेछ । निडर र जुझारु बन्नुहुनेछ र झैझगडा, विवाद आदिबाट पछाडि हट्नु हुन्न । मिहिनेत र कर्मठताले कामधन्धामा प्रगति र विकास हुनेछ । वरिष्ठ व्यक्तित्व र सत्ताधारी व्यक्तिसित सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ, साथै बन्दव्यापारबाट पनि लाभ मिल्नेछ । एउटा इच्छाअनुकूलको यात्रा सम्पन्न हुनाले असीमित लाभ मिल्नेछ ।
प्रतिस्पर्धामा विजयी भएर आफ्ना शत्रुमाथि दबाब सिर्जना गर्ने समय हो, यो । स्वास्थ्य पनि अनुकूल रहने छ । व्यय स्थान र लग्नमा भ्रमण गर्ने बृहस्पतिको शुभ प्रभावले पछाडि उछित्तो काड्ने र कुरा काट्नेहरू आफैं चुप लाग्नेछन् । नोकरी र व्यायसायिक जीवनमा सुधार आउने छ । प्रतिष्ठा र पदोन्नतिको सम्भावना छ । आफ्नो सर्कलमा सम्मान र साख मिल्नेछ । मुद्दामामिला वा सरकारी काममा सफलता मिल्नेछ । तर बाह्रौं भाव अनियन्त्रित खर्चको भाव भएकाले बाध्यात्मक खर्चको मात्रा बढ्ने समय छ, साथै उधारोमा गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ, अनि पारिवारिक किचलो र बिना उद्दश्यको यात्रामा समयको बर्बादी हुनसक्छ । जेठदेखि श्रावणसम्म बृहस्पति र तपाईंको राशिस्वामी शनिश्चरको गतिमा बक्रता देखिने भएकाले यस अवधिमा तपाईंले थकान र चिडचिडेपनको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ । पञ्चमेश शुक्रले वर्षारम्भमा पाँचौं भावकै यात्रा गरिरहेको समय छ, त्यसैले सन्ततिपक्षका यावत समस्याहरूको समाप्ति हुने वर्ष हो, यो वर्ष । साथै मकर राशिका छात्रछात्राले केही गर्ने समय पनि हो, विवेक, बुद्धि र समुचित अनुमानका कारण यस पटक सामाजिक सम्मान प्राप्त हुनेछ । नयाँनयाँ उद्यम र योजना कार्यान्वयन गर्नाले सफलता मिल्नेछ । कल्पना र भावुकतामा मन रुमल्लिने सम्भावना हुन्छ, यो समय प्रणय र रोमान्सका लागि पनि राम्रै छ । सृजनशीलताको प्रशंसा र सराहना हुनेछ । पारिवारिक सुखमा अभिबृद्धि हुनेछ ।
यसरी समग्रमा २०७७ साल तपाईंका लागि मध्यम फलदायी बनेर आएको छ । आर्थिक उत्थानका लागि नयाँनयाँ काममा हात हाल्ने समय हो । तर साँढेसाती शनिका कारण पारिवारिक समस्या, मनमा अशान्ति, झुट्टा आरोप, काममा ढिलासुस्तीजस्ता अनिष्ट फल लाग्ने भएकाले शनिदेवको शान्ति गर्नु राम्रो हुनेछ । नोकरीमा थुप्रै अपजश खप्नु पर्ने हुन्छ । व्यापार व्यवसायबाट समान्यतया लाभ नै हुनेछ । यस वर्ष गरिएको आम्दानीले गर्नुपर्ने खर्चलाई धान्न सक्दैन, त्यसैले पैतृक सम्पत्ति तथा संचित धनको उपयोग गर्नु पर्ने हुनसक्छ । सामाजिक र धार्मिक क्षेत्रमा धेरै समय बित्नेछ । वर्षको उत्तरार्द्धबाट अध्ययनमा जाँगर चल्नेछ । आर्थिक दृष्टिले असार, कार्तिक, मंसिर र चैत्र महिना शुभ रहेका छन् भने वैशाख, भदौ, पुस र माघ महिना तपाईंका लागि कमजोर बन्ने देखिन्छ ।
यस वर्ष कुम्भ राशिका जातकहरूका लागि शनिश्चरको साढेसातीको प्रारम्भिक अवधि हो । यद्यपि श्रावण २१ गतेदेखि मंसिर ०१ गतेसम्म तपाईंको राशिमा साढेसातीको प्रभाव रहने छैन । यस अवधिमा चित्तमा उत्साह र उमंगको सञ्चार हुनेछ । प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसितको सम्बन्ध नजिकिने छ । फंसेको धन उकास्ने प्रयास सफल हुनेछ । दाजुभाइ र दिदीबहिनीका सँग मतभेद बढ्ने सम्भावना छ । सम्पत्ति क्रयरविक्रय गर्नका निमित्त यो वर्ष राम्रो हुनेछ । मातापिता वा गाउँघरका वयोबृद्ध व्यक्तिहरूसित धार्मिक वा पर्यटकीय क्षेत्रको भ्रमण हुनेछ । विद्यार्थी र परीक्षार्थीले राम्रो सफलता हासिल गर्ने समय हो । पतिपत्नीमा तालमेल हुने समय छ । दाम्पत्य जीवन तथा सन्ततिसुखमा पनि शुभ प्रभाव नै रहने छ । नोकरीमा पदोन्नति वा लाभ पाउने समय हुनेछ ।
तर यस वर्षको प्रारम्भिक तीन महिना र पछिल्लो पाँच महिना तपाईंका लागि साढेसातीको आद्यदशाको प्रभाव रहने भएकाले कुम्भ राशिका जातकहरूका लागि शुभ र अशुभ प्रभावको उस्तै उस्तै संयोजन गरेर नयाँ वर्ष २०७७ प्रारम्भ भएको छ । वर्षारम्भमा राशिस्वामी शनिश्चर, कर्मेश मंगल र लाभेश बृहस्पति यी तीनवटै मुख्य ग्रहहरूले बाह्रौं भावको यात्रा गरिरहेको समय हो । त्यसैले धेरै आशावादी बन्ने समय छैन, तर जगल्लग्न कुण्डलीको लग्न तपाईंको राशिबाट दशम भाव अर्थात् कर्मक्षेत्रमा परेको हुँदा कार्यक्षेत्र र रोजगारीको क्षेत्रमा झिनो आशा राख्दा फरक पर्ने छैन । राशिस्वामी शनिश्चरको प्रभावले यस अवधिमा अनियमित र बेठिक कामका कारण चिन्तित बन्नु पर्नेछ । सनक र उन्मादबाट प्रेरित भएर गरेको कामकाजबाट हानि पुग्नेछ र गहिरो सङ्कटमा फँस्न सक्नुहुन्छ ।
स्वास्थ्य पनि प्रतिकूल हुने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै जोखिम न्यूनीकरणका निमित्त तपाईंले अर्काका सल्लाह, सुझाव र आशयलाई सुन्ने बानीको विकास गर्नु राम्रो हुन्छ । घरका पारम्परिक कृत्य सम्पन्न गर्न वा निर्माणादि कार्यमा समेत धनव्यय हुने समय छ । यो वर्ष खर्चको मात्रामा अत्यधिक बृद्धि हुने वर्ष हो, यस क्रममा कुनै अचल सम्पत्तिको बिक्रीबट्टा हुने या धितो राखी ऋण काढ्ने परिस्थितिसमेत बन्नेछ । हुन त वर्षको सुरुको केही महिना र अन्तिम केही महिना यसै भावमा बृहस्पतिले समेत बसिदिएर नीचभंग राजयोगको सिर्जना हुनेछ र अनि वर्षको अन्तिम १५ दिन तपाईंकै राशिमा बृहस्पतिको आगमन भएर परिणामस्वरूप केही शुभता प्राप्त हुनेछ । जस्तै ससाना यात्राबाट राम्रो फल मिल्नेछ । विदेशबाट राम्रो समाचार प्राप्त हुनेछ वा विदेशयात्राको प्रयास सफल बन्नसक्छ । नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसित सम्पर्क हुनाले भाग्य बढ्ने छ । पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुनेछ । चतुर्थ भावमा सुखस्थान र भाग्य भावको मालिक शुक्रको उपस्थिति भएकाले लटरी वा चिट्ठाबाट धनलाभ हुनसक्ने परिस्थितिसमेत छ । यो वर्ष नयाँ दम्पतीले बेबीप्लान गर्ने वा नयाँ घरघडेरीको जोहो गर्ने समय हो । यस वर्षको भाद्रमा राहु र केतुको राशिपरिवर्तन हुँदैछ र यिनले तपाईंको चतुर्थ र दशम भावमा प्रवेश गर्नेछन्, परिणामतः त्यसपछि तपाईंको जीवनचर्यामा अझ कठिनाइ र विपरीत परिस्थितिको निर्माण हुने भएकाले तुलनात्मक रूपमा वर्षको पूर्वार्द्ध नै आशावादी बन्ने समय छ ।
कुम्भ राशिका जातकहरूका लागिसमग्रतालाई विचार गर्ने हो भने यो वर्ष त्यत्ति शुभ फलदायी समय देखिंदैन । हुन त बन्दव्यापारबाट राम्रै लाभ हुनेछ । पुर्ख्यौली सम्पत्ति विवाद चुलिने समय छ, परिणामतः घरपरिवारमा आपसी मतभेद बढ्ने र आफ्नै मानिसहरू टाढिने समय हुनेछ । शत्रुहरू कमजोर हुनेछन्, अनि आफ्नै शरणमा आइपुग्न बेर लगाउँदैनन् । परिवारभित्र रोगको निवास हुनेछ, स्वास्थ्योपचारका सिलसिलामा ठूलो धन राशि खर्च गर्नु पर्ने परिस्थिति बन्नेछ । नोकरी र सामाजिक कामबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ । वर्षारम्भ र वर्षान्तमा साँढेसातीको प्रभाव रहने भएकाले काममा ढिलासुस्ती, शरीरमा आलस्य, मनमा अशान्ति, आफन्तमा वैरभाव जस्ता फल प्राप्त हुने हुँदा शुभफल प्राप्तिका लागि शनिदेवको शान्ति गर्नुपर्नेछ । यस वर्ष शुभताका दृष्टिकोणले वैशाख, साउन, मंसिर र पुस महिनामा शुभफल तथा जेठ, असोज, माघ र फाल्गुन महिनामा अशुभ फल पाउने सम्भावना हुन्छ ।
मीन राशि भएका जातकहरूका निमित्त साधारणतया लाभकारक र सुखबर्द्धक वर्ष हो । यो वर्ष काम त सफल हुन्छ, तर हरेक काम दोहोर्याउनु पर्ने वा मन्द गतिमा सम्पन्न हुने समय छ । पारिवारिक वातावरण सुखद रहने छ । कुटुम्बका बीचमा मनमुटाव वा कलहको स्थिति छ भने अब मेलमिलापको वातावरण कायम हुनेछ । धनागमका विविध मार्गहरूको उदय हुनेछ । नयाँ ठाउँमा कारोबार प्रारम्भ हुने वा नयाँ व्यवसायमा लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति बन्नेछ । सुखसुविधा र भोगविलासका सामाग्रीहरू वा श्रृंगारिक सामाग्री र लक्जरियस वस्तुको व्यापार गर्नेले केही हदमा लाभ प्राप्त गर्नेछन् । यो वर्ष जग्गाजमिन खरिद गर्ने र पुरानो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने परिस्थिति समेत बन्नेछ । मातापिताको स्वास्थ्यबाधाले चिन्तित तुल्याउने वर्ष हो । विद्यार्थी, परीक्षार्थी र प्रतियोगीले बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने समय छ । सन्तानपक्षबाट सुख हुनेछ । न्यायिक निकाय र अड्डा अदालतको काममा आंशिक सफल भइने छ । व्यापारिक कारोबारमा उतारचढावको स्थिति बन्नेछ । मित्र र साथीसंगीको साथ सहयोग नै प्राप्त हुने समय छ । स्वास्थ्यमा आंशिक बाधा पुग्नेछ ।
कर्मक्षेत्र, लाभ भाव र वर्षान्तमा व्ययस्थानमा राशिस्वामी बृहस्पतिले भ्रमण गर्ने तथा तपाईंको भाग्य भावमा जगल्लग्न कुण्डलीको लग्न भाव बनेको यो वर्ष अत्यधिक सकारात्मक फलका साथमा उपस्थित भएको छ । यसको प्रभावले तपाईंको कार्यक्षेत्रमा विस्तार हुनेछ । शक्ति र सामर्थ्यमा बृद्धि हुनेछ । सिनियर्स र उच्च अधिकारीहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ । सरकारी काम वा राज्यपक्षबाट पाउने पद सुविधामा बृद्धि हुनेछ । सरकारी काम र मुद्दा मामिलामा लाभ प्राप्त हुनेछ । यो वर्ष चलअचल सम्पत्ति र धनधान्यमा वृद्धि हुने समय हो, यस अवधिमा धनसम्पत्ति र सुखसुविधा आर्जन गर्ने पक्षमा आकर्षित रहनु हुनेछ । आवश्यकताभन्दा बढी आत्मविश्वासको सिर्जना हुनेछ, तपाईमा अहंकार र आडम्बरको भावना विकसित हुनेछ । सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारको कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेबारी प्राप्त हुनसक्छ ।
वर्षान्तमा वैदेशिक प्रयोजनको यात्रा हुने सम्भावना पनि हुन्छ, जुन सुझबुझ र लगनशीलताका कारण फलदायक सिद्ध हुनेछ । सामाजिक सङ्घसंस्था वा परोपकारका क्षेत्रमा सहयोग गर्नु पर्नेछ । लाभ स्थान र कर्मक्षेत्रमा भ्रमण गर्ने शनिश्चरको प्रभावले समस्त इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पूर्ण हुनेछन् । नयाँ काम र उद्यम सुरु हुनेछ । त्यस्तै वर्ष प्रवेशको समयमा चतुर्थ र दशम भावमा रहेका राहु र केतुले भाद्रपछि राशिपरिवर्तन गर्नेछन् । उक्त प्रभावले े लुकेको आन्तरिक ऊर्जाका माध्यमले जस्तै काम पनि सम्पन्न गर्ने क्षमता प्राप्त हुनेछ । उद्देश्य उपलब्धीमूलक हुनेछ । दृढ़ इच्छा शक्तिका कारण विपरीत परिस्थितिमा पनि विवेक गुम्दैन र समुचित काम हुनेछ । सामाजिक सम्बन्धमा विस्तार हुनेछ र प्रतिष्ठामा पनि अभिबृद्धि हुनेछ ।
समग्रतामा भन्ने हो भने यो वर्ष मीन राशिका व्यक्तिहरूलाई राम्रै वर्ष रहेको देखिन्छ । अधुरा रहेका कामहरू पूरा हुनेछन् । पारिवारिक समस्याबाट मुक्ति मिल्नेछ । काममा परिवारका सदस्य र नातेदारले सहयोग गर्नेछन् । भूमि तथा वाहन प्राप्तिको योगसमेत छ । दाजुभाइका बीचको विवाद छ भने पनि अब समाप्त हुनेछ । मुद्दामामिला र झैझगडामा आफ्नै विजय हुनेछ । नोकरी र सामाजिक कामबाट सन्तुष्टि मिल्ने छैन । वैदेशिक क्षेत्रको काम अधुरै रहने छ । व्यापार र उद्योग व्यवसायबाट मध्यम लाभ हुनेछ । सामान्यतया यस वर्षको असार, कार्तिक, फाल्गुन र चैत्र महिना तपाईंका लागि अशुभ परिणामका साथमा उपस्थित हुने छन् भने जेठ, भदौ, पुस र माघ महिनामा राम्रा परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ।